Breaking…डा. केसीको स्वास्थ्य ग’म्भीर बन्दै, सास फेर्न गा’ह्रो पछि अक्सिजन दिन शुरु ! – उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सक्दो शेयर गरौँ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/Breaking…डा. केसीको स्वास्थ्य ग’म्भीर बन्दै, सास फेर्न गा’ह्रो पछि अक्सिजन दिन शुरु ! – उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सक्दो शेयर गरौँ !
असोज १८ काठमाण्डौं । २१ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था ग’म्भीर बनेको छ। छाती दु’ख्न र सास फेर्न गा’ह्रो परे पछि डा. केसीलाई अक्सिजन दिईएको छ । डा. केसीको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पनि घ’टेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
केसीको उपचारको नेतृत्व गरिरहेका शिक्षण अस्पतालको क्रिटिकल विभाग प्रमुख डा. सुवास आचार्यले उनलाई कुनै पनि बेला आईसीयूमा सारेर उपचार सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन। १९ औं पटक चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका डा. केसीको मागप्रति सरकारले वार्ता गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने वातावरण नबनाउदा केसीको स्वास्थ्य समेत प्रतिकुल हुदै गएको छ । डा. केसीको पक्षमा सडकमा प्र’दर्शन समेत हुन थालेको छ ।
डा केसीले अन्य अत्यावश्यक तत्व र औषधिहरु भने लिन मानेका छैनन्। डा केसीले आफ्नो १९औं अनसन सुरु गरेको २१ दिन पुगिसकेको छ। तर, सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । गत बिहीबार सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर डा केसीले भने अस्वीकार गरेका थिए।
विदेशबाट फर्किनेहरुको लागि सरकारले घटायो जहाज भाडादर ( हेर्नुहोस् नयाँ भाडादर )